Ahoana ny fanamboarana fisarahana zip fisie? - DataNumen
Manamboatra fisarahana zip fisie (hevero fa 'Myplit' ny anaran'ny rakitra.zip'), azafady mba ataovy izao:
1. Download DataNumen File Splitter ary apetaho amin'ny solosainao.
3. Tsindrio ny bokotra "Miaraha".
4. Ao amin'ny fifanakalozan-kevitra "Miaraha", safidio ny fisie fisarahana rehetra ary ampio amin'ny lisitry ny rakitra loharano.
5. Hamarino tsara fa ny filaharan'ny fizarana ao anaty lisitra dia mitovy amin'ny filaharany tany am-boalohany, izany hoe, ny Myplit.z01 no voalohany ary ny Myplit.z1 no faharoa sns sns.zip no farany.
Ampiasao ny bokotra "Mandrosoa" ary "Mandrosoa" mba hanitsiana ny filaharany raha ilaina. Raha misy ampahany tsy hita na simba, dia azonao atao ny tsy miraharaha azy io, saingy mbola mila mitazona ny baikony ianao. Ohatra, raha tsy hita ny ampahany 2, dia alao antoka fa ireo ampahany ao anaty lisitra dia mysplit.z01, mysplit.z03,…, MySQL.zip.
6. Apetraho ny anaran'ny rakitra tianao aleha, toy ny mysplit_merged.zip
7. Kitiho ny “Start Midira ”hanatevin-daharana ireo ampahany ao amin'ny fisie rakitra Myplit_merged.zip.
8. Rehefa vita ny fizotran'ny fidirana dia azonao atao start DataNumen Zip Repair ary manamboatra mysplit_merged.zip toy ny mahazatra zip fisie Ny fisie rakitra dia misy ny angon-drakitra amin'ny faritra rehetra amin'ny fisarahana Zip fisie Azonao atao ny manokatra azy amin'ny malaza Zip fampitaovana toy ny WinZip, MandresyRAR, Etc.
anjara, zip rakitra